တရုတ် CNC Collet Chuck Holder, BT40 Collet Chuck Holder, BT30 Tool ကိုရှင်, MAS403 Tool ကိုရှင်ထုတ်လုပ်သူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > tool ကိုရှင်BT Tool ကိုရှင် MAS403
BT Tool ကိုရှင် MAS403 ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, CNC Collet Chuck Holder, BT40 Collet Chuck Holder ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, BT30 Tool ကိုရှင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြင့်မားသော Precision BT40-NBJ16 Mills Chuck
မြင့်မားသော Precision BT30-C32-105L Coolets Chuck
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း BT40-ER11A-150 Tool ကိုရှင်
High Quality MTA Mills စက် tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
စက် Tool ကို Shanks MAS403 BT SLN Tool ကို Holder
BT oz Shanks Holder CNC tool ကိုကိုင်ဆောင်သူထိခြင်း
High Quality BT40-MTA3-75 အင်္ကျီလက် Adapt
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း G2.5 BT30-GER20-70 Tool ကိုရှင်
မြင့်မားသော Precision BT30-GER16-90 Tool ကိုရှင်
High Quality BT30-SLN32-90 ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore
CNC သည်မြင့်မားသော Precision BT30-ER11-70 Tool ကို Holder
High Quality BT30-C25-100 လမျးဖွောငျ့ Collets Chuck
High Quality BT30-GSK16-90 Collets Chuck
BT Shell ကအဆုံးစက် Arbore ပေါင်းစပ်
CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck BT APU လေ့ကျင့်ခန်း Chuck
BT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore MAS403 Chuck Arbore
OMS ဘေးထွက် Lock ကိုရေနံအစာကျွေးခြင်းအဆုံးကြိတ် Arbore
BT SLN ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore
မြင့်မားသော Precision BT40-NBJ16 Mills Chuck ထုတ်လုပ်မှုစံ: MAS403 BT Tool ကိုရှင် ဇာစ်မြစ်၏နေရာအရပ်: တရုတ်လုပ် BT40 = Taper Shanks taper 7:24; ER = အဆိုပါ er collet သတ်မှတ်ချက်များ; 100L အလုပ်၏အရှည် = ။ ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ: 1. မြင့်မားသောတိ။ 7:24 taper အချိုး, AT3 စံနှင့်အညီ။...
မြင့်မားသော Precision BT30-C32-105L Coolets Chuck function: ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောကြိတ်ခုတ်ခြင်းနှင့် reamers အဖြစ်ဖြောင့် Shanks ကိရိယာများနှင့် tools များ၏ Clamp များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ: အဆိုပါ Clamp အင်အားအတော်လေးကြီးမားသည်နှင့်ညှပ်တိကျစွာကောင်းလှ၏။ ကွဲပြားခြားနားသော Shanks...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း BT40-ER11A-150 Tool ကိုရှင် ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ: စတော့ရှယ်ယာရပ်နေ CNC ဓါးလက်ကိုင်၏ 1.A ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, အကွာအဝေး, OEM ကာလပတ်လုံးရေးဆွဲရှိပါတယ်အဖြစ်ကျနော်တို့ perfectness နိုင်ပါတယ်။ 2. မြင့်သောတိ။ 7:24 taper အချိုး, AT3 စံနှင့်အညီ။ အထုပ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုများသောအားဖြင့် 0.005mm...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12 - 13 / Bag/Bags
High Quality BT40-MTA3-75 အင်္ကျီလက် Adapt အမျိုးအစား: 1, Morse က Mills Tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ (MTB) 2, Morse က type ကိုနည်းနည်းကိုင်ဆောင်သူ (MTA) အမည်: MTA Morse ကန့်ပြားချပ်ချပ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုလေ့ကျင့်၏ installation ကို, reamers နှင့် Non-စံ tools တွေကိုအဘို့သင့်လျော်သည်။ MTB Morse ကရဲ့ Non-ပြားချပ်ချပ်အမြီးနှင့်အတူ...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10 - 10.8 / Piece/Pieces
စက် Tool ကို Shanks MAS403 BT SLN Tool ကို Holder အမည်: အစာရှောင်ခြင်း tool ကို clamping များအတွက်သင့်တော်, etc ရှုး, ကြမ်းတမ်းသောငြီးငွေ့စရာ tool ကို, milling အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ: အဆိုပါဘေးထွက်တပ်ဆင်ထား tool ကိုစွဲကိုင်ထားသူအားကြီးမား Clamp အင်အားရှိပြီး၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်,...
BT oz Shanks Holder CNC tool ကိုကိုင်ဆောင်သူထိခြင်း 1.Accuracy: <0.005mm 2.Materials: 20CrMnTi 3.Speed:> 12000rpm အဓိကအားဖြင့် collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ,...
High Quality BT40-MTA3-75 အင်္ကျီလက် Adapt အမျိုးအစား: 1, Morse က Mills Tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ (MTB) 2, Morse က type ကိုနည်းနည်းကိုင်ဆောင်သူ (MTA) အမည်: MTA Morse ကန့်ပြားချပ်ချပ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုလေ့ကျင့်၏ installation ကို, reamers နှင့် Non-စံ tools...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း G2.5 BT30-GER20-70 Tool ကိုရှင် မြင့်မားသော Precision BT30-GER20-70 Tool ကိုရှင်, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, ကြိတ်ရှုး၏အမျိုးအစားစုံ, မကျြနှာကိုကြိတ်ရှုး, ရှုး milling, သုံးမျက်နှာကြိတ်ရှုး .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်: အ axial...
မြင့်မားသော Precision BT30-GER16-90 Tool ကိုရှင် မြင့်မားသော Precision BT30-GER16-90 Tool ကိုရှင်, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, ကြိတ်ရှုး၏အမျိုးအစားစုံ, မကျြနှာကိုကြိတ်ရှုး, ရှုး milling, သုံးမျက်နှာကြိတ်ရှုး .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်: အ axial...
High Quality BT30-SLN32-90 ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore အမည်: အစာရှောင်ခြင်း tool ကို clamping များအတွက်သင့်တော်, etc ရှုး, ကြမ်းတမ်းသောငြီးငွေ့စရာ tool ကို, milling အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ: အဆိုပါဘေးထွက်တပ်ဆင်ထား tool ကိုစွဲကိုင်ထားသူအားကြီးမား Clamp အင်အားရှိပြီး၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်,...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10 - 10.5 / Piece/Pieces
CNC သည်မြင့်မားသော Precision BT30-ER11-70 Tool ကို Holder ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ: စတော့ရှယ်ယာရပ်နေ CNC ဓါးလက်ကိုင်၏ 1.A ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, အကွာအဝေး, OEM ကာလပတ်လုံးရေးဆွဲရှိပါတယ်အဖြစ်ကျနော်တို့ perfectness နိုင်ပါတယ်။ 2. မြင့်သောတိ။ 7:24 taper အချိုး, AT3 စံနှင့်အညီ။ အထုပ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုများသောအားဖြင့်...
High Quality BT40-MC32 လမျးဖွောငျ့ Collets Chuck function: ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောကြိတ်ခုတ်ခြင်းနှင့် reamers အဖြစ်ဖြောင့် Shanks ကိရိယာများနှင့် tools များ၏ Clamp များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ: အဆိုပါ Clamp အင်အားအတော်လေးကြီးမားသည်နှင့်ညှပ်တိကျစွာကောင်းလှ၏။ ကွဲပြားခြားနားသော Shanks...
High Quality BT30-GSK16-90 Collets Chuck BT, Shell ကအဆုံးကြိတ် Holder ပေါင်းစပ် ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, ကြိတ်ရှုး၏အမျိုးအစားစုံ, မကျြနှာကိုကြိတ်ရှုး, ရှုး milling, သုံးမျက်နှာကြိတ်ရှုး .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်: အ axial သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကြိတ်ရှုး၏ radial...
BT Shell ကအဆုံးစက် Arbore ပေါင်းစပ် 1, M က aterial: 20CrMnTi BT Tool ကိုရှင် 2, ထုတ်လုပ်မှုစံ: MAS403 BT Tool ကိုရှင် 3, ဇာစ်မြစ်၏နေရာ:
CNC ပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်ခန်း Chuck BT APU လေ့ကျင့်ခန်း Chuck 1, M က aterial: 20CrMnTi BT Tool ကိုရှင် 2, ထုတ်လုပ်မှုစံ: MAS403 BT Tool ကိုရှင် 3, ဇာစ်မြစ်၏နေရာ: တရုတ်လုပ် 4, BT40 = Taper Shanks taper 7:24; ER = အဆိုပါ er collet သတ်မှတ်ချက်များ; 100L အလုပ်၏အရှည် =...
BT လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Arbore MAS403 Chuck Arbore 1.Accuracy: <0.005mm 2.Materials: 20CrMnTi အဓိကအားဖြင့် collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး,
BT OMS ဘေးထွက် Lock ကိုရေနံအစာကျွေးခြင်းအဆုံးကြိတ် Arbore မြင့်မားသောတိ အမြင့်ခိုင်မာသော အရည်အသွေးမြင့်မားသော မော်ဒယ်အရေအတွက်: BT40 / 50 OML20 / 25/32/40 ။ နားကိုထွက်လျင်မြန်စွာ။...
BT SLN ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore စက်မှုဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း tool ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက် BT Tool ကိုရှင်။ ရိုးရှင်းသော, လူကြိုက်များဗိုင်းလိပ်တံ Shanks ကွန်နက်ရှင်စံ, အဓိကအားဖြင့် BT30 BT40 BT50 ... etc ဖြစ်ပါတယ် .....
တရုတ်နိုင်ငံ BT Tool ကိုရှင် MAS403 ပေးသွင်း
BT40 Tool ကိုရှင်; ကောင်းမွန်သော Surface က finish ကို, တိုးမြှင့် feed ကိုမှုနှုန်း
ကောက်ပဲသီးနှံအရွယ်အစားကာဗွန်အဖြိုက်နက်မြင့်မားခိုင်မာခြင်း, ALTINcoating မြင့်မား wear-ခုခံ, CNC ကြိတ်စက်၏မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်အထူးအသုံးပြုမှု, alos, ချောကိုတိုးမြှင့်သည့်ပွတ်ကိန်းမီတာကိုလျှော့ချနှင့်ပိုပြီးထုတ်လုပ်မှုအချိန်မှတပါးယင်းတွင်ခုံထိရောက်မှုမီတာတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ထားပါတယ်
Tool ကိုတင်းကျပ်ခြင်းနှင့်ကောင်းသော chip ကိုဥတု, ရှုထောင်မှိုစက် three- High-တိကျမှုအတွက်အသင့်တော်ဆုံး
BT30 Tool ကိုရှင်
MAS403 Tool ကိုရှင်